Sida loo dar Lyrics Music inay ku Mac
> Resource > Video > Sida loo dar Lyrics in MP3 on Mac
Lyrics in MP3 waa biyo waxa loo kalluumaysto. Lyrics waa lagama maarmaan noo ah inay ku wareegaan adduunka music ee aan is badiyay. Lyrics ayaa muujiyaan dareenkooda iyo sida sharraxaan ee erayo wanaagsan, oo weligoodba la xafiday karo. Xataa kuwa isku dayaya in ay bartaan luqad cusub, ay door bidayso in ay dhagaystaan ​​heesaha iyo ka baran lyrics ee natiijo ka wanaagsan.
Dhibaato waa lyrics ma yihiin had iyo jeer waxaa jira sababo badan. Tusaale ahaan, si ay u lyrics song MP3 ma laga heli karaa internet-ka, ama ciyaaryahanka meesha music ciyaarayaa ma ku dari kartaa lyrics in MP3 si toos ah. Ha welwelin mar dambe, Wondershare TidyMyMusic u Mac caawin kara Dufcaddii download lyrics oo dhan oo aad music daray barnaamijka. Download First barnaamijkan si ay u helaan waxa ay ku rakiban iyo ka dibna na raac si aad u hubiso tallaabooyinka fudud ee hoose.
1 heesahaaga TidyMyMusic dar u Mac
Haddii aad qabto Lugood on your computer, TidyMyMusic si toos ah iskaan doonaa maktabadda Lugood iyo aad u hesho dhammaan music ee ku daray in ay tab nidaamsan Lugood.
Wixii MP3 files deegaanka, waxaad si toos ah u soo jiidi kartaa faylasha in ay hoos ku Music ah tab hagaagsan meesha aad sidoo kale riixi kartaa batoonka File Open dooro heeso.
2 lyrics heeso Add
Muujinta mid MP3 file oo ah ka heli Aqoonso button on xaq u hooseysa. Riix badhanka, markaas barnaamijka bilaabi doonaan in ay soo bixi lyrics internet ka. Intay sii socdaan, macluumaadka ID3 ah oo ku saabsan song iyo farshaxanka album ayaa sidoo kale lagu dari doonaa.
Fiiro gaar ah: Si aad u badan oo ka mid ah heesaha qaban, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan oo dhan music iyo guji Aqoonso soo xulay oo suga in shuqulka oo dhan in la sameeyo. Ama waxaad riix badhanka Scan dusheeda halka macluumaadka oo dhan lama soo baadhi doonaa in qaybta hore ee bar xaaladda.
Marka habka baadhi ay ka badan tahay iyo macluumaadka oo dhan muujiyaan ilaa, guji Codso si loo badbaadiyo macluumaadka oo dhan. Markaasay aad file MP3 waa dhameystiran oo faah.
3 macluumaad Edit ku saabsan muusiga (optional)
Muuqaal kale oo sheeegateen oo ka mid ah barnaamijkan waa in ay kuu ogolaanaya in aad xaalkaa macluumaadka sida aad jeceshahay. Riix icon ku yaal sanduuqa casaan haystaa oo hoose oo nooca in erayada wax. Oo waxaad kale oo jiidi karaan sawir ka folder deegaanka si ay noqon farshaxanka album ah.
Waxay u egtahay la yaab leh, soo maaha? Marka laga reebo dhammaan hawlaha kor ku xusan lagu muujiyey, waxaa kale oo uu leeyahay hawlaha aasaasiga ah sida ciyaaro music by double-ilamaha. Ma doonaysaa in aad iska baarto hadda? Ka hor tag oo saas kuma gabi doono.